घरमै पनिर कसरी बनाउने ?
काठमाडाैं | भदौ २६, २०७८
घरमै पनिर कसरी बनाउने भन्ने सवाल धेरैका हुन्छन् । पनिर बनाउन खासै गाह्रो पनि छैन र धेरै सामग्रीको आवश्यकता पनि पर्दैन ।
पनिर दूधबाट बनाइने एक शुद्ध शाकाहारी परिकार हो । पनिर बनाउन भैसीको पानी नमिसाएको शुद्ध बाक्लो दूध भयो भने उत्तम हुन्छ ।
लगभग ५ प्रतिशतभन्दा माथि फ्याट भएको दूध पनिर बनाउन उत्तम मानिन्छ । पनिरबाट सयौं विभिन्न परिकार बनाउन सकिन्छ । पनिरका परिकारहरू विश्वभरका होटल रेस्टुरेन्टमा सहज पाइन्छ र पछिल्लो समय घरायसी प्रयोजनमा पनि व्यापक उपयोग हुन थालेको छ । माछामासु नखानेका लागि पनिर उत्तम विकल्प मानिन्छ ।
पनिर बनाउन चाहिने सामग्रीः
धेरै फ्याट भएको बाक्लो दूध २ लिटर, कागतीको रस या भिनेगर १५ एमएल, पातलो सुतिको कपडा १ मिटर
पनिर बनाउने विधिः
सर्वप्रथम दूधलाई बाक्लो कराइ या डेक्चिमा उमाल्ने र एकछिन हल्का चिसो हुन दिने । केही चिसो हुनासाथ कागतीको रस या भिनेगर हालेर छाडिदिने । २ या ३ मिनेटपछि बिस्तारै चलाउने र दूध फाटेर चोक्टा पानी छुट्टिँदै जान्छ ।
यसरी फाटेको दूधलाई पातलो कपडामा छान्ने र पानीको मात्रा सबै छुट्याउने । यसरी तयार भएको छेक्रालाई छेना भनिन्छ र यो धेरै इन्डियन मिठाइ बनाउन पनि प्रयोग गरिन्छ ।
तयार भएको छेनालाई कपडाले बाँधेर बराबर लेबल मिलाएर माथिबाट केही गहकिलो वस्तुले थिचेर १ रात फ्रिजमा चिस्याउने । भोलिपल्ट पनिर सेट भएर तयार हुन्छ ।
यसरी कडक भएर सेट भएको पनिरलाई ब्लक–ब्लकमा काटेर पानीमा भिजाएर स्टोर गर्न सकिन्छ र लामो समयसम्म प्रयोग गर्न मिल्छ । पनिर तयार भएपछि यसबाट यावत परिकारहरू पनि घरमै बनाउन सकिन्छ ।
पनिरबाट के–के परिकार बन्छ ?
माथि भनिएजस्तै पनिरबाट सयौं परिकार तयार गर्न सकिन्छ । जस्तो कि पनिर टिक्का, जाफरनी पनिर, पनिर बटर मसला, मटर पनिर, कडाइ पनिर, कुर्चन पनिर, पनिर लबाबदार, पनिर करी, पनिर भुजुरी, पनिर टिक्की, पनिर नान, पनिर पराठा, पनिर काठी रोल, पनिर जाल्फ्रेजी, तिरङ्गा पनिर, अचारी पनिर, तावा पनिर, पनिर चिल्ली, पालक पनिर, दम पनिर, पनिर बिर्यानी, शाही पनिर, मुग्लाई पनिर, पनिर कोफ्टा, पनिर पकोडा, पनिर कोर्मा, मेथि पनिर, अम्रितसरी पनिर, नवाबी पनिर, पनिर पसन्द, कोल्हापुरी पनिर, कास्मिरी पनिर आदि प्रसिद्ध छन् । जुन परिकारहरू व्यावसायिक रूपमा विश्वभर चलेका छन् ।
लिटमस केबलको ब्राण्ड एम्बेसडर बने राजेश हमाल दम्पत्ती
जाडो याममा चियामा मरिच राखेर खाने चलन छ । प्रायः जाडो समयमा चियामा राखिने कालो मरिचले न्यानो गराउन मात्र होइन, स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्दछ । यी हुन् मरिचका फाइदा मरिचको सेवनले पेटको दुखाई कम गर्न मद्दत गर्छ ...
यसरी बनाउनुस् स्वादिलो बदाम चाट !
जाडोमा भुटेको बदाम खान मज्जा आउँछ । त्यसलाई अझ चाट बनाएर खान पाए त स्वादै बेग्लै । हामी तपाईंलाई बदाम चाट बनाउन सिकाउँछौं । सामग्री बदाम तीन कप प्याज मसिनो गरी काटिएको एक गोलभेंडा मसिनो गरी क...
काठमाडौं- तपाईंले बेस्सरी टाउको दुख्ने माइग्रेन रोगका बारेमा त पक्कै सुन्नुभएको होला । विश्वभरिमा एक अर्ब व्यक्ति माइग्रेनबाट ग्रस्त छन् । कुनै माइग्रेनमा हल्का मात्र टाउको दुख्छ भने कुनै माइग्रेनमा चाहिँ टाउको...
काठमाडौं - मान्छेको शरीरमा ससाना डल्ला जुनसुकै ठाउँमा पनि हुनसक्छ । कसैकोमा एउटा मात्र होला भने कसैकोमा सयवटा डल्ला होलान् । यी डल्ला हेर्दा डरलाग्दा देखिन्छन् तर यिनले खासै हानि गर्दैनन् । सौन्दर्यलाई भने यिन...
नीममा रहेका गुणहरूले अनेकौं रोगको उपचार काम गर्छन् । यसका औषधीय गुणका कारण आयुर्वेदमा यसको प्रयोग हजारौं वर्षदेखि हुँदै आइरहेको छ । नीमलाई संस्कृतमा अरिष्ट भनिन्छ जसको अर्थ लाग्छ श्रेष्ठ, पूर्ण र कहिल्यै खराब नह...
काठमाडौँका १९ ठाउँमा बुस्टर डोज
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काठमाडौँ जिल्लाका १९ वटा खोप केन्द्रबाट कोरोना भाइरस विरुद्धको ‘बुस्टर’ डोज उपलब्ध गराइरहेको छ । यही माघ २ गतेदेखि अग्रपङ्क्तिमा काम गर्नेलाई काठमाडौँ उपत्यकाका १९ ठाउ...